तिथि मेरो पत्रु »5कुराहरू उहाँले तपाईं आवश्यकता उहाँलाई सम्झाउनुहोस् गर्न भन्न
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 27 2021 |2मिनेट पढ्न
यो एक मान्छे देखाउन कुराहरू तपाईंलाई हेरचाह र अझै भन्न साँच्चै धेरै सजिलो छ, हामीले विशेष गरी हामी को लागि दी संग छौं मान्छे ले जहाँ दीर्घकालिक सम्बन्ध मा, हामी गर्छन. हामी यस्तो खुल्लमखुल्ला मायालु हाउभाउ विगत र तपाईं आफ्नो साथी संग आराम गर्दै छन् किनभने शायद साँचो हो कि एक हदसम्म छौं जस्तै एक दीर्घकालिक सम्बन्ध मा हामी महसुस ज्यादातर किनभने. तर हरेक अब र फेरि सानो छ, महत्व कुराहरू के तपाईं ख्याल देखाउन र उहाँले अझ त अब प्रारम्भिक दिनहरुमा गरे र तिनले जस्तै धेरै आवश्यकता उहाँलाई सम्झाउनु भन्न सक्छौं.
एक राम्रो सन्देश पाठ
उहाँले काम मा छ भने, एक सरल “आफ्नो दिन राम्रो रहेको छ आशा” यो भोजन-ब्रेक स्नेह देखाउने को एक धेरै राम्रो तरीका हुनेछ समयमा. यो तपाईं उहाँलाई सोच रहे र ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ. यो उहाँको मुस्कान बनाउन पक्का छ.
ढोका बाहिर मार्गमा राम्रो अभिवादन
तात्पर्य “एक राम्रो दिन छ” वा “हेरविचार” तिनीहरूले आफ्नो बाटो हो जब बाहिर तपाईंलाई हेरचाह देखाउने. तपाईं म यो पनि सराहना को हुनेछ निश्चित छु तर तपाईं एक बिदाइ धेरै अक्सर अभिवादन गर्न केहि छैन भने चुम्बन गर्न आवश्यक छैन.
कि तपाईं एक व्यक्तिको रूपमा तिनीहरूलाई चासो हो भनेर देखाउँछ किनभने मानिसहरू एक साथी मा प्रेम भन्ने कुरा तिनीहरूलाई सुन्नुहुन्छ व्यक्तिलाई छ. तर अक्सर एक व्यक्ति तिनीहरूले संग हो व्यक्तिले ती चासो लिन्छन् र आफ्नो हित त तपाईं के भनेर देखाउन भन्ने महसुस गर्दैन. बस धेरै लापरवाही कुराकानी मा यो ड्रप. जस्तै केहि, “तपाईं रुचि हो शो रात मा छ” के तपाईं सुन्नुहुन्छ शो.
तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी बनाउन होला के मा के भन्छन् न्याय. उदाहरणका लागि उहाँले गिटार उनले एक कर्ड खेल गर्नुपर्छ उहाँलाई बताउन खेल्दासमेत, उहाँले फैशन मा छ भने त्यो राम्रो देखिन्छ वा त्यो संगीत उहाँलाई बताउन रुचि भने त्यो संगीत बारेमा धेरै जानकार छ उहाँलाई बताउन. कहिलेकाहीं हामी सबै अनौठो प्रशंसा को लागि माछा पकडने छन्.
तपाईं तिनीहरूबाट प्रेम बताएँ
जोडे को धेरै उनि एक व्यक्ति संग आराम गर्दै छन् जब धेरै अक्सर यो भन्न छैन. एक अर्थमा प्रेम अब भने गर्न सबै समय तर हरेक आवश्यकता र फेरि तपाईं के भनेर सम्झना छैन शायद स्पष्ट छ र.
रोमान्स, हामीले के अनुभूति या केहि?